Sababta Shirka wada-tashiga uu u baaqan doono | KEYDMEDIA ONLINE
Sababta Shirka wada-tashiga uu u baaqan doono
Xukumadda Xil-gaarsiinta ayaa ku adkeysaneysa in qorshahii shirka Wada-tashiga aysan waxba iska badalin, sidii ballantu ahaydna uu xilligiisii qabsoomi doono, halka Madaxda DG intooda badan ka maqan yihiin magaalada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Maanta oo khamiis ah kuna beegan May 20, 2021 ayaa hore loo qorsheeyay in uu magaalada Muqdisho ka furmo shir madaxeedka doorashooyinka dalka, kaas oo uu iclaamiyay Ra’iisul Wasaaraha Xukumadda xilk-gaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble.
Afyaheenka Xukuumadda, Maxamed Ibraahim Macalimoow, ayaa warbaahinta u sheegay in shirkii loo ballansanaa uusan qorshihiisa waxba iska badalin islamarkaana uu ku dhici doono waqtigii loogu talagalay, maanta ka furmi doono Caasimadda.
Hayeeshee, Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada ayaa intooda badan ku sugneyn Muqdisho, waxaana gabal-dhicii shalay soo gaaray kaliga Madaxweynaha DG Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’.
Madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland iyo Koofur galbeed, ayaa la filayaa in ay saacadaha soo aaddan ka soo degaan Garoonka Aadan Cadde, halka Madaxweynaha HirShabeelle uu dib u dhici karo, maadaamada dagaal qasaaro xooggan dhaliyay uu shalay ka dhacay Jowhar.
Sida muuqata, shirka ayaa dib ugu dhici kara maalinta Sabtiga ah, maadaamada ilaa hadda inta badan madaxdii muhiimka u ahayd ay maqan yihiin, isla markaan ay birri tahay maalinn Jimco ah.
Sida uu qorshu aha haddii maanta shirku furmo, waxuu kulanka maanta noqon doonaa kaliya soo dhaweyn, kadibna Madaxda safaradda soo gashay ayaa qaadan doona nasiino, inta ay soo Caasimadda ku soo aruurayaa Madaxda oo dhan.